१ महिनामै पायल्स ठिक पार्न चाहानुहुन्छ ? उसोभए औषधीका साथै यो १ चिज खानेगर्नुहोस् ! – Ap Nepal
काठमाडौँ । पाइल्स रोकथाममा पनि मुलाभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन । मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुने गर्दछ । यसको सबैभन्दा ठुलो फाइदा यो हो कि मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या बढ्दा पनि बढ्दैन ।
यसबाट पाचन प्रक्रियापनि राम्रो हुन्छ । मुलामा कयौ यस्ता तत्व पाइन्छ, जुन पाइल्सका भएपछि हुने पीडा कम गर्न सहयोगीसिद्ध हुन्छ । यसका साथै मुलाले चिसो बनाउने काम पनि गर्दछ, जसबाट जलनमा पनि राहत प्राप्त हुन्छ ।
पाइल्स रोगीले काँचो मुला सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तपाई चाहनु हुन्छ भने यसलाई पिँधेर पनि सेवन गर्न सक्नु हुन्छ । अझ तपाई मुलाको रस निकालेर पनि पिउन सक्नु हुन्छ ।
मुलाको रस सेवन गर्दा भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह आवश्य लिनुस् । तपाई मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न लगाउन पनि सक्नु हुन्छ । अहिले त बजारमा मुलाको पाउडर पनि सहजै पाइन्छ । अझ तपाई मुलाको रस निकालेर पनि पिउन सक्नु हुन्छ ।
मुलाको रस सेवन गर्दा भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह आवश्य लिनुस् । तपाई मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न लगाउन पनि सक्नु हुन्छ । अहिले त बजारमा मुलाको पाउडर पनि सहजै पाइन्छ ।
Prevबालगायक सचिन परियार र बिनिता कुमालबिचको पहिलो भेट,अन्तरवार्तामै लास्टै हसाए- हेर्नुस (भिडियो सहित )
Nextस्टेजमै गायिकाले पुरुष फ्यानलाई स्टेजमा बोलाएर मुखमा पि’साब गरिदिइन्..सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भा,इरल
महिलाको झारफुक गर्ने क्रममा मृ’त्यु, कु’टपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै दुई झाँक्रीसहित सात जना पक्राउ